अक्टोबर 25, 2018 अक्टोबर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments औषधि, डा. राम बहादुर बोहरा
साइलीसिया (Silicea) औषधि पिपलाई सुकाउन, नपाकेको घाउलाई फोर्न सर्जनको काम गर्दछ । लामो समयसम्म रहने पिनासलाई निको बनाउन बेजोड छ । मैले थुप्रै रोगीलाई दिएर हेरेको छु । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हानीरहित उपचार गराउन सके राम्रो हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ ।
वायोकेमिक औषधि हानीरहित छ यसको प्रयोग बच्चाबुढा सबैलाई निर्धक्क भएर चलाउन सकिन्छ । कहिलेकाही गल्ती जुन ठाउमा राख्नुपर्ने थियो त्यहाँ नराख्दा बच्चाले खाएपनि कुनै नोक्सान नगर्ने खुवी यो औषधिमा छ । औषधि यस्तो हुनुपर्छ जसको असर शरीरमा नहोस एउटा रोग निको नभएपनि अर्को रोग नलागोस ।
यो औषधि टिबी भएको अवस्थामा भने प्रयोग गर्नु हुदैन यसले रोग बढ्न सक्छ । आजकल होम्योपैथीक औषधि विश्वको थुप्रै देशहरूमा प्रयोग भई रहेको छ । सवैभन्दा बढी प्रयोग जर्मन र भारतमा भइरहेको छ । जर्मनमा आयुर्वेदिक जडिबुटीबाट होम्योपैथीक मदर टिंचर तयार गरेर एण्टिबायोटिक जस्तै काम गर्ने औषधि निर्माण गरेर मानव स्वास्थ्यमा राम्रो भुमिका खेलेको देखिन्छ ।
मात्रा : ४ गोली दिनमा ४ पटक खाने
SBL Biochemic Tablet Silicea is indicated for Brittle nails, growth disturbances of hair, nails, diseases of bones, caries, skin does not heal easily, weeping eczema, pyorrhoea and as may be advised by the physician
← कलियुगको प्रभाव नेपालबाट शुरु हदैछ ?
स्त्री रोगको अचुक औषधि अशोका मदर टिंचर (Ashoka Mother’s Tincture) →
डिसेम्बर 8, 2018 डिसेम्बर 8, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
4 thoughts on “धेरै रोगको अचुक औषधि साइलीसिया (Silicea)”
Pingback:स्त्री रोगको अचुक औषधि अशोका मदर टिंचर (Ashoka Mother’s Tincture) – Science Infotech
Pingback:थाहा पाउनुहोस् होम्योपैथीक औषधि सेवनबारे उपयोगी जानकारी
Pingback:यस्तो छ बहुउपयोगी होम्योपैथीक औषधि थुजाबारे मेरो अनुभव